Maxay ahayd nooca ugu fiican ee AutoCAD?
Waxaan had iyo jeer ku aragnaa su'aasha halkaas ku saabsan, nooca noo fiican ama maxaan u difaaceynaa; markaa mid cusubi yimaaddo, waxaa badanaa la yiraahdaa waa uun qurxiyo. Sikastaba, barta bilowga ah waxaan ku sameynay su'aasha Facebook, halkaas oo Geofumadas ay ku leeyihiin 18,000 oo raacsan, oo arag waxa jawaabtu ahayd: AutoCAD 2012 ayaa taagan, waxaan ku fahannay ...
Muuqaalka sawirka iyo qaybta la jaray AutoCAD 2013
Isbeddelada ugu muhiimsan ee noocyada ugu dambeeyay ee AutoCAD waxay la shaqeynayaan moodooyinka 3D. Kulamada lala yeelanayo qaybta 'AutoCAD 3D', waxaa la codsaday in qaar ka mid ah aaladaha Hindisaha loo qaado nooca aasaasiga ah waxaana macquul ah inay taasi sabab u tahay isbeddelada ay AutoDesk adeegsatay illaa noocyadii 2010, inkasta oo horumarka ...
Si ka duwan aagga Geospatial halkaas oo codsiyada Open Source ay ka sarreeyaan kuwa lahaanshaha, waxaan aragnay barnaamijyo aad u yar oo bilaash ah oo loogu talagalay CAD marka laga reebo barnaamijka LibreCAD ee weli in badan socda. In kasta oo Blender uu yahay aalad si cadaalad ah u xoog badan, jihaynteedu waa animation ee maahan in CAD lagu dabaqo injineernimada, ...
AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, IntelliCAD
Soo koobid: Maxaa Cusub ee AutoCAD 2013 ku saabsan noocyada kale ee cusub
Jadwalkaani wuxuu soo koobayaa wararka AutoCAD 2013 ay la xiriirto isbeddelada ay ku soo warisay AutoDesk noocyadi ugu dambeeyay (AutoCAD 2012, 2011 iyo 2010) Waxaa iska cad inay kuwani yihiin wararka muhiimka ah ee ay soo sheegaan AutoDesk, qaar ka mid ah kuwaas ayaa wax laga badalay ama lagu hagaajiyay noocyo kale iyo waliba qaarkood waxay lahaayeen waxqabadyo fudud ...
Toddobaadkan wuxuu ahaa maalin aad u qanacsan, waxaan baray koorso AutoCAD ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Microstation, iyada oo la sii wado koorsada qaabdhismeedka ee aan bixinnay maalmo ka hor iyadoo la adeegsanayo CivilCAD si loo soo saaro qaabka dijitaalka ah iyo khadadka dusha sare. Sababta ugu weyn ee aan u sameynay waxay ahayd inkasta oo ...
Waa la sifeeyey sifooyinka nooca cusub ee PlexEarth uu keenayo, kaas oo la filayo in lagu dhawaaqo dhamaadka Oktoobar 2011. Sababta ugu weyn ee qalabkani u helay aqbalida weyn ayaa ah inuu xaliyo wixii barnaamijku aanu qaban karin. CAD-da ugu caansan (AutoCAD) adduunka ...
AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, tabo cusub
Fududeynta fiidiyoowga loogu talagalay AutoCAD, bilaash ah maalmaha 7
Tani waa fursad aanu qofna u seegi karin. Si ku meel gaadh ah, illaa ugu dambayn Sebtember 2011 CADLEarning waxay soo bandhigtay kuuboon kuu furan oo aad ku geli karto dhammaan ilaha jira illaa 7 maalmood. CADLearning waa mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee ay ogolaatay AutoDesk horumarinta buugaagta iyo koorsooyinka ...
Yaan rabin koorsada tooska ah ee AutoCAD khadka tooska ah ... Marka la soo koobo, ma jiraan wax la mid ah qaadashada koorso rasmi ah oo lala yeelanayo macallin wanaagsan oo lagu barto AutoCAD. Laakiin ikhtiyaarka aan ku tusi doono ayaa iga yara yara yaabtay, anigoo tixgelinaya inuu AutoCAD 2012 yimid waqti aan fogayn. Kani waa koorsada AutoCAD 2012 ee kor loo qaaday ...
Ka dib ku dhowaad 30 sano oo labadan barnaamij ah, oo dhinaca ahaan u muuqda mid ka mid ah kuwa yar ee ka badbaaday muddada dheer ee taariikhda isbeddelka, waxaan waqti u qaatay inaan tixgeliyo mawduuca si aan u muujiyo qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee geeddi-socodka, in aan xusuusanno wixii dhacay iyo wixii ...
Waa wax caadi ah in la helo baahida loo qabo in loo beddelo faylal fara badan qaab aad u ballaaran: Waxaan helnaa mashruuc 45 dwg faylal ah oo qaab AutoCAD 20112. Waan ognahay in feylashaas laga akhrisan karo AutoCAD 2010 iyo 2011 laakiin haddii qalabka halka ay u socdaan la arki doono oo keliya waxay leedahay AutoCAD 2008 waxaan ubaahanahay inaan badalno. Way na dhaafayaan ...
Ugu dambeyntiina, iyo sida loogu dhawaaqay taariikhdaan, AutoDesk wuxuu diyaariyey dhammaan macluumaadka la xiriira sheekooyinka AutoCAD 2012. Si la mid ah, waxa ay uga dhigan tahay qeybaha kale, marka laga reebo AutoCAD ee Mac, oo wali ku jirta wixii aan aragnay sanadkii hore 2011-kii.
AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Microstation-Bentley
Waqtigan sanadka badanaa waa mid aad u firfircoon bilaabida noocyo cusub iyo xalal ku saabsan arinta juqraafi. Halkan waxaan ku soo koobayaa ugu yaraan 10 oo dareenkeyga soo jiitay maalmihii ugu dambeeyay, saacadaha iyo daqiiqadaha. ERDAS waxay Japan siisaa casriyeynta dayax gacmeedka dayax gacmeedka Bentley Navigator, oo loogu magac daray Top among
AutoCAD 2012 Bentley Systems 3D GvSIG OS
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, tabo cusub, Microstation-Bentley
Bishan daabacaadda cusub ee 'Geoinformatics' ayaa timid, iyadoo mowduucyo aad u qallafsan ay ku jiraan CAD, GIS, dareenka durugsan, maaraynta xogta; dhinacyada aan hadda ka dib lagu arki karin go'doon. Mabda 'ahaan waxaan soo bandhigayaa falanqeyn mid ka mid ah mowduucyada sida aadka ah ii xiiseynaya, dhammaadka wax lagu soo koobayo mowduucyada kale ee tan ...
AutoCAD 2012 Map-ka AutoCAD 3D majallado
Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012 | Siyaasadda Khaaska ah
Waxaan dhowr maalmood ka fogaaneynaa inaan aragno ogeysiiska ugu horreeya ee waxa AutoCAD 2012 soo celiso, mashruuc loogu talagalay inuu yahay Iron-man. Kahor intaysan taasi dhicin, waxaan dib u eegay malahayga horaantii sanadka anigoo isbarbar dhigaya dillaacyada ay sii daayeen ganacsatada maxalliga ah. Waxyaabaha soo socdaa waa miis isbarbardhigaya wararka ...
Guga gugan waxaan arki doonnaa nooca cusub ee AutoCAD 2012, wararka qaar ayaa naga dhigaya inay umuuqato inay durba aad u dhowdahay. Wax badan kamaanaan aqoon waxa aan filan karno, marka laga reebo waxa ay ka faalloodaan bulshooyinka Anglo-Saxon, iyo saadaashayda yar, rajadaydu waxay hadda ku wajahan tahay waxa aan u arki karno mid cusub ...